China slurry Pump Materials Selection ifektri kanye nabaphakeli | I-YAAO
Empompini oshibilikayo impeller kanye nangaphakathi kukasende kuhlale kuvezwa kuludaka futhi kufanele kuvikelwe ngokufanele ngokugqokwa.
"Ukukhethwa kwempahla yokuhambisa indlwana kanye nezikebhe kubaluleke ngendlela efanayo nokukhethwa kwepompo uqobo!"
Kunezimo ezintathu ezihlukile ezakha ukugqoka kupompo yesilayidi:
Kunezinhlobo ezintathu ezinkulu zokuhuzuka:
Emaphampu e-slurry esinawo ikakhulukazi ukugaya nokulimala kokucindezeleka okuphansi.
Izinga lokuhuzuka lincike kusayizi wezinhlayiyana nobulukhuni.
Ukuhuzuka kwenzeka kuphela ezindaweni ezimbili kupompo yesilayidi:
1.Phakathi impeller kanye itheku umile.
2. Phakathi komkhono we-shaft nokupakisha okumile.
Lokhu ukugqoka okuphezulu kumaphampu we-slurry. Isizathu ukuthi izinhlayiya ku-slurry zishaya indawo ebonakalayo ngama-engeli ahlukile.
Ukugqoka ukuguguleka kwenhlabathi kuthonywe kakhulu yindlela iphampu elisebenza ngayo. Ukugqoka ukuguguleka kwenhlabathi, ngokuvamile, kubuncane besilinganiso se-BEP ﬂ ow, futhi kukhuphuka ngokugeleza okuphansi kanye nangaphezulu.
Ngenxa yezizathu ezingaqondakali kahle, ukuguguleka kokuguguleka kungakhuphuka kakhulu uma iphampu livunyelwe ukusebenza ku- "snore"; okungukuthi, ukufaka umoya epayipini lokungena.
Kuphakanyisiwe ukuthi lokhu kungabangelwa yi-cavitation, ngenxa yendawo yokumpompa edlidlizayo njengoba umoya uphezu kwabo. Lokhu-ke, nokho, kunzima ukwamukela njengamabhamuza omoya ngokujwayelekile acindezela i-cavitation ngokunyakazisa izintambo zomhwamuko.
Kunezinhlobo ezintathu ezinkulu zokuguguleka komhlaba:
Umphumela wokuguguleka kwezakhi zepompo:
I-impeller ingaphansi kokuthinteka kokugqoka (okuphezulu nangaphansi) ikakhulukazi esweni, ohlangothini lwendlala (A), lapho i-turns ow iba neminyaka engama-90 °. Onqenqemeni oluholayo lwe-vane (B).
Umbhede oshibilikayo nomthelela omncane we-angular wenzeka ezindaweni eziphakathi kwezingqimba ze-impeller (C).
Ama-liners asemaceleni (ama-liners angenayo nawasemuva)
Imicu eseceleni ingaphansi kombhede oshibilikayo nokuchoboza nokugaya umhuzuko.
I-volute ingaphansi kokuthinteka kokugqoka emanzini asikiwe. Umbhede oshibilikayo nokugqoka okuncane komthelela we-angular kwenzeka kulo lonke ivolumu.
Ukugqwala (nokuhlaselwa ngamakhemikhali) kwezingxenye ezimanzi ku-Slurry Pump kuyinto eyinkimbinkimbi eyinsimbi ne-elastomer.
Ukuholwa, amatafula amelana namakhemikhali wezinsimbi nezinto ze-elastomer anikezwa ngokulandelayo nangokwesigaba Amathebula Okuphikisana Nemichiza.
UMax. Impeller Ithiphu
Ijubane (m / s)
Ithempeli eliphakeme kunawo wonke (oC)
Ngokuqhubekayo Ngezikhathi ezithile
(-50) kuye ku-65 100
Ukuvikelwa kokugqoka - yiziphi izinketho?
Kukhona ezinye izinketho ezinkulu ekukhetheni ukuvikelwa kokugqoka kwamaphampu we-slurry:
Impeller kanye nobukhulu bezinhlamvu ku-Hard Metal kuma-alloys ahlukahlukene wensimbi emhlophe nensimbi.
I-impeller kuma-elastomers kanye ne-casing evikelwe ngama-elastomer liners. Ama-Elastomers ngokuvamile ayirabha ngezimpawu ezahlukahlukene noma i-polyurethane.
Inhlanganisela ye-impeller yensimbi eqinile ne-elastomer-lining-casings.
Ukukhethwa kwezinto zokugqoka
ukukhethwa kwezingxenye zokugqoka kuyibhalansi phakathi kokumelana nokugqoka nezindleko zezingxenye zokugqoka.
Kunezindlela ezimbili zokumelana nokugqoka:
Izinto zokugqoka kufanele kube nzima ukumelana nokusika kwesisindo sokuqina kokuqina! noma Impahla yokugqoka kufanele ibe nokunwebeka ukuze ikwazi ukwamukela ukushaqeka nokuphindaphindeka kwezinhlayiya!
Ukukhethwa kwezingxenye zokugqoka kuvame ukususelwa kumapharamitha alandelayo:
Usayizi oqinile (i-SG eqinile, ukuma nobulukhuni)